Maitiro ekupisa CD ine mumhanzi kana vhidhiyo pakombuta yako Gadget nhau
Maitiro ekupisa CD ine mumhanzi kana vhidhiyo pakombuta yako
Paco L Gutierrez | | General, Mufananidzo uye kurira, Software
Sezvatakambokurukura mune chinyorwa muTechnology Guides kwatakaratidza mapurogiramu akanakisa ekushandura edu maCD emimhanzi kuva MP3, chimiro chemuviri chiri kufa zvishoma nezvishoma. Izvo zviri kuwedzera kuoma kuwana zvishandiso zvine rutsigiro rwema discs, iyo mamiriro ndeye zvemukati zvemadhijitari. Zvakanyanya kudaro, zvekuti hapana kana mota inouya nerutsigiro rwema discs, uye kana malaptop.
Musika unonongedzera mukushambadzira kana pane-zvinoda zvemukati, uko masevhisi akadai seNetflix, Spotify kana Amazon Prime anomira, ane zvese mimhanzi nemavhidhiyo masevhisi. Asi kana tiri vamwe vevaya vachiri kuda kutora mukana wekurekodha kushandisa vhidhiyo yedu kana mimhanzi yedu padhisiki, isu tine akati wandei akakodzera mapurogiramu ekunyora izvi nenzira yakapusa. Isu tinongoda komputa ine disc burner kana kutenga yekunze imwe.
1 Chii chatinogona kunyora uye nei?
2 Zvirongwa zvekupisa madisc muWindows
2.2 DORO 120%
2.4 DAEMON Midziyo Lite
3 Zvirongwa zvekupisa ma discs mu macOS
3.1 Express kupisa
Chii chatinogona kunyora uye nei?
Tinogona kutaura kuti ihwo hunyanzvi hwakakanganikwa, iwo nguva dzataigara takakomberedzwa nema disc asina kugadzirwa akagadzirira kupiswa pakombuta yedu; zvakanyanya zvekuti Mune chero chitoro, kunyangwe hazvo chiri chidiki sei, takawana zvinyorwa zvekutenga; zvese izvi zvakadzoserwa kumashure nekuda kwekutenderera kana pane-zvinoda masevhisi sezvatatotaura.
Kunyangwe zvakadaro, hazvimborwadzi kuva neimwe sarudzo yekuchengetedza mimhanzi yedu dhisiki kana mafirimu atinongoda kuramba tichinakidzwa asi tichichengeta yepakutanga mubhokisi rayo. O tsime zvirongwa kana mharidzo dzatinoda kuendesa kunzvimbo dzatisina mukana wekushandisa komputa asi kune mutambi (chimwe chinhu chichiwedzera chisingajairike). Tichakurudzira sarudzo yemapurogiramu ekunyora kurekodha chero faira reCD, DVD kana BLU-RAY.
Zvirongwa zvekupisa madisc muWindows
Iyo ndeimwe yemapurogiramu echinyakare, iine pfupi interface uye yakati yapera nekufamba kwenguva, asi inonzwisisika uye yakapusa. Ichi chirongwa chinotibvumidza kunyora chero chinhu chatinogona kufungidzira, chero fomati yatinoda uye chakanakisa pane zvese ndechekuti haina mahara.
Inoenderana nechero vhezheni yeWindows, kubva paWindows 95 kusvika kune yakanyanya kukwirisa Windows 10. Izvo zvichatibvumidza isu kurekodha chero yepanyama svikiro, kunyangwe iyo isina kujairika senge fomati inoshandiswa neXBOX 360 (HD DVD).
Isu tine mukana wekuti wakambopisa iyo disc, uiongorore kuburikidza nesoftware kuti uve nechokwadi che100% kuti inoverengwa zvizere mune chero muverengi. Tinogona kugadzirisa saizi yeiyo buffer kana kunyorera diski yedu nesiginicha yedhijitari.
Mune izvi LINK tinogona kurodha pasi chirongwa.
Chirongwa chakagadzirwa nechinangwa chekuve yakanakisa sarudzo yekugadzira chaiwo madhiraivha kana kuumbiridza mifananidzo. Inoenderana nemafomati asingaverengeke anosanganisira: mds, iso, bwt, b5t, b6t, ccd, isz…. Izvo pasina mubvunzo zvichave zvakanaka pakugadzira backup makopi echinhu chero chinouya mupfungwa. Semuenzaniso, tinoda kopi yeCD yekuisa Windows; nepurogiramu iyi tichazviita mumaminitsi mashoma.
Iine Doro 120% rese disk kuumbika inyaya yematanho mashoma, ayo kuburikidza neayo nyore interface Chero mushandisi anogona kuita zvisinei nekuti haana ruzivo rwakadii.
Mune izvi LINK tinogona kuikanda.
Chimwe chirongwa chekare, chine chinongedzo icho kunyangwe chiri chekare uye chipfupi, chakanyatsorongeka zvekuti chiri nyore kwazvo uye chinonzwisisika. Chero mutauro unowanikwa saka mutauro hauzove dambudziko kune chero mushandisi. Chirongwa ichi chakanangana nekurekodha kwerudzi rupi zvarwo, tinogona kugadzira muunganidzwa wematrekhi mu MP3, AAC, WAV, FLAC kana ALAC.
Kunyangwe izvo zvatingaite kungoteedzera mafaera sekunge yaive Pen drive. Zvese izvi zvinogona kuitwa neese maCD nemaDVD. Inopindirana neshanduro dzese dzeWindows kubva muna 2000, XP kuenda kuWindows 10. Iyo ine yakasanganiswa mutambi, asi pasina kupokana haizove iko mashandisiro atinoipa iyo, asi iripo.
DAEMON Midziyo Lite
Iyo pro pro kugona chirongwa che "Vakagadziri" zvemukati. Chairo chikuru basa hachisi chekupisa madiski eodhiyo kana vhidhiyo, asi asi Inotarisa mukugadzirwa kwemifananidzo chaiyo, senge ISO. Pane ese atakatumira kusvika parizvino, zviri pasina mubvunzo iro rinonakidzwa neyakajairika interface, ini ndingatoti pane ese runyorwa, asi zvakaenzana zvine mutsindo uye zvakapusa.
Ngatitii chirongwa ichi chiri inonyanya kukodzera kurekodha, semuenzaniso, mitambo yemavhidhiyo kana mabhaisikopo, zvese paDVD neBLU-RAY. Iyo inotibvumidza isu kuzviita mune akati wandei zvikamu kana zvichidikanwa. Iyo yemahara vhezheni ine kushambadzira, asi ndiwo mutengo wekubhadhara kana tisingade kubhadhara mari kubva muhomwe medu. Kunyangwe isu tine sarudzo yekutenga iyo risingagumi rezinesi reupenyu hwese chete € 4,99, iyo ichatipa mukana wekuiisa pane anosvika matatu makomputa.
Tinogona kurodha pasi chirongwa mune izvi LINK.
Hongu, tinogona kupisa mumhanzi disc tisina kuisa chero chinhu pakombuta yedu kana iine Windows yakaiswa. Kubva paWindows XP kusvika gumi, ichi chinhu chinobatsira chinouya neWindows Media Player.
Hapana mubvunzo Iyi sarudzo kune avo vanongoda kunyora zvishoma nezvishoma mimhanzi isinganzwisisike CD. Sezvo izvi zvakaganhurirwa uye zvisingambokupe sarudzo dzekurekodha, kunyange zvichishanda mushe uye mhando yekopi yacho yakanaka kwazvo. Zvakanakisisa pane zvese, isu hatifanirwe kuita chero yekuwedzera kumisikidza kana kurodha pasi.
Zvirongwa zvekupisa ma discs mu macOS
Avo vedu vanoshandisa zvigadzirwa zvemaapuro zvakare vane mvumo yekupisa edu matiski, saka tiri kuzopa dzimwe nzira dzekuzviita mune macOS inoshanda sisitimu. Izvo zvakasiyana ndezvekuwedzera asi isu tinogona kunakidzwa nesarudzo dzakangofanana neidzo dzatinadzo muWindows.
Tinotanga nezvandiri sarudzo yakanakisa; Zita rayo, sekuratidzira, rinoreva kumhanya kwayo, saka tiri kubata nechirongwa chinotibvumidza kurekodha ma disc nekumhanya kwakakwirira kupfuura avhareji, kunyangwe isu tine mukana wekuzvinyora pazasi kumhanya kuti tipe hunhu hwakanakisa zvinogoneka.
Tiri kutarisana nechimwe chezvikumbiro zvakakwana zverondedzero yese. Tinogona kunyora vhidhiyo muAVI kana MPG. Gadzira uye gadzirisa maraibhurari eDVD uye gadzirisa matemplate ekufambisa mamenyu. Tinogona kuwedzera watermark kumarekodhi edu, isu tinotova nemukana wekurekodha vhidhiyo mafaera muPAL kana NTSC, pamwe nekushandura chimiro chechimiro chepanoramic skrini.
Ichi chirongwa chakareruka sekuratidzwa kwezita racho. Pisa ese maCD nemaDVD. Inomhanya pane chero vhezheni yeanoshanda system kubva MacOS X senge kuCatalina. Iyo inotibvumidza isu kupisa Archive discs, mimhanzi discs, kugadzira zvishoma kudyidzana, kuwanda discs uye zvimwe zvakawanda.
Ichi chirongwa chiri nyore kwazvo kushandisa neinongedzo seushamwari sezvo iri nyore uye minimalist. Chinhu chega chinokanganisa chatinoona mune ino software ndechekuti kana uchipisa DVD zvinofanirwa kuti fomati yevhidhiyo iri .mpg. Haisi dambudziko hombe kufunga kuti chirongwa chinoshandura otomatiki mafaira kuita .mpg; Kunyangwe kune izvi isu tichafanirwa kumirira kwechinguva apo iko kutendeuka kunoitwa usati wanyora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Software » Maitiro ekupisa CD ine mumhanzi kana vhidhiyo pakombuta yako
Nei Epublibre isiri kushanda? Tarisa uone idzi dzimwe nzira
AUKEY EP T25 Headphone Ongororo